Aqoon iyo Afkaar |
Ismaaciil Ibraahim Hassan — May 12, 2019
Aqoonta Qeexideedu Waa maxay?
Afkaartuna Tibaaxdeedu Maxay Tahay?
Malays orankaraa afkaarta wanaagsan ee dadka waxay ku timaadaa cilmiga ay barteen, mise waa waaya aragnimo tuseyso in falcelinta maskaxdoodu abuurto afkaar wax dhista?
Dhigaalkan cajiibka ah waxaa igu kalifay, inaan qalinka u qaato taasoo ah, waxaad arkeysaa dad afkaartoodu cajiib tahay sida ay u bixinayaan hadana aan wax aqoon ah lahayn iyo dad aqoon leh oo misna hal fikrad xitaa maskaxdoodu ku jirin.
Afkaartu asal ahaan qeexideeda waxaa lagu macneynkaraa aragtiyo badan oo la soo bandhigo taasi oo la odhankaro mid taban iyo mid toganba.
Afkaarta wanaagsan ee dunidu ku socoto hal agaasinkeeda waxaa leh dad waayo aragnimo gaamurtay ku dhex lahaa bulshada dhexdooda, hadana qibradii ay ka qaateen ay u noqotay inay maskaxdooda ka maaxato afkaar wax dhista oo badhaadhe iyo hormar lagu gaaro.
Afkaartu qofka uu leeyahay lama orankaro waxay la xidhiidhaa tacliin uu bartay ama waa qof weyn oo cilmi badan leh. Tusaale waxaad arkeysaa qof da’ ah oo hadana hadalkiisu markaad si u qooraansato qudhaada xitaa ku qabaneyso inuu yahay aqoon yahan gaamuray oo waxbadan soo arkay lana kulmay! Haa qofkaasi da’da ah aqoon wuu leeyahay aqoontiisana maaha mid uu qalin iyo buug ka bartay ee waa dhacdooyin uu goob joog u ahaa oo fikir iyo qibrad aguuman kaga baxday taasoo ah heerka waaya aragnimo ee afkaartiisu dhaxalsiisay.
Afkaartu qofka uu leeyahay lama orankaro waxay la xidhiidhaa tacliin uu bartay ama waa qof weyn oo cilmi badan leh.
Tusaale waxaad arkeysaa qof da’ ah oo hadana hadalkiisu markaad si u qooraansato qudhaada xittaa ku qabaneyso inuu yahay aqoon yahan gaamuray oo waxbadan soo arkay lana kulmay!
Haa qofkaasi da’da ah aqoon wuu leeyahay aqoontiisana maaha mid uu qalin iyo buug ka bartay ee waa dhacdooyin uu goob joog u ahaa oo fikir iyo qibrad aguuman kaga baxday taasoo ah heerka waaya aragnimo ee afkaartiisu dhaxalsiisay.
Aqoontu qudheedu way dhici kartaa in ay ku dhaxalsiiso adigoo wax curinkara ama sameynkara balse waxaa ka horeyso in aad horta qibrad aad leedahay adigu, oo waayo aragnimo ku dhisan, micneheeduna waxay tahay kaba soo qaad qofku aqoon ku filan wuu leeyahay wax badana wuu soo bartay hase ahaate aqoontu usoo bartay ma awoodo in uu xitaa hal shey uu ka curiyo ama fikir cusub uu ka sameeyo, sababtoo ah taasi waxaa keeni karta in Aqoonta uu lahaa aysan ahayn mid uu daraasaad ka raadin jiray ama daba gal ku sameyn jiray wuxuu bartay balse ay tahay Aqoon baan leeyahay oo intii aan bartayna jawaabeheeda waan hayaa laakiin, aragti kama sameynkaro!
Midna ila fahan afkaarta aad leedahay waa mid ka soo baxda kalsoonida naftaada aadku qabto! Waayo hadal muhiim ah hadana aad ka baqaneyso in laguugu waxyeeleeyo balse ahaan lahaa hadaad gudbi lahayd afkaar raad iyo raasamaal badan reebta.
Aan u sii daadagee Aqoontu ma afkaar ayay leedahay?, mise afkaarta ruuxdeeda ayaa aqoonta ku dhisan?
Weydiintaasi waxay quseysaa qofka akhrinaya maqaalkan loona baahanyahay in macluumaad cajiiba aadka soo saarto!
Waxaan ku soo gunaanadayaa maqaalkaygan Aqoontu waa cilmi kaa maqnaa ood baratay lana rabo in curis ka soo saarto hase yeeshee taa waxay ku xirantahay heerka hal abuurnimo ee aad leedahay, afkaartuna waxay kuu bilaabmaysaa markaad ogaato in wax aad ogaankarto oo ah la noolaanshaha qoyskaaga, la dhaqanka saaxiibadaada, la jooga dadka xikmada u saaxiibka.
Midna ogsoonow hadduu la jirkaaga ku bato kuwa garaadka hooseeya waxay kuu horseedeysaa in fikirkaagu noqon doono mid taban ama lidku ah habdhaqanka kale ee dadkaaga iyo naftaadaba. Seem-bari ku xirnoow oo la saaxiib dadka waayo aragnima kaa sareysa u leh ee hadana xikmada iyo quruxda qofnimo ka muuqato.
Tags: Afkaartuna Tibaaxdeedu Maxay Tahay?Aqoon iyo Afkaar - Aqoonta Qeexideedu Waa maxay
Next post Sidee Loo Baara Borotiinka Kujira Dhiigga?
Previous post Farqi Noocee ah Ayaa u Dhaxeeya Qabiilka iyo Qabyaaladda?